Xeerar Kamida Farxada Lamaanaha! Soo Ururintii Axmed Cali Kaahin. | WAJAALE NEWS
Xeerar Kamida Farxada Lamaanaha! Soo Ururintii Axmed Cali Kaahin.
1;in la is’kula dhaqmo dhaqan wacan oo lagu raali galinayo Allaah Subxaanah.
2;in had iyo jeer la wadaago dhoola cadayn iyo dabacsanaan joogta ah marka guriga la soo galo, iyo marka la sii baxayaba iyo salaanta istaalmka in la joogteeyo waa duco barako la socotee.
3;in lagu dadaalo in aan la dhaawacin Dareenka qofka lana dhawraa niyada lana ilaaliyaa arimaha gaar ka u ah ee qofka, waayo waa basher soo noolaan jiray hortaa.
4;in la ixtiraamo Ra’yiga lamaanahaaga oo aan la xaqirin aragtidiisa lana wadaagaa wada tashi ay ku dheehan tahay kalsooni aad mu muujiso. Waayo in qofka kalsooni siisaa waxay dhashaa in uu daacadnimadiisa si xora u soo bandhigo,
5;in aad fuliso soo jeedimaha lamaanahaaga sida ku takri falka arimaha guriga oo kale iyo xidhiidhka ka dhexeeya saxiibadiisa taasi oo aan wax yeelayn nolosha qoyska iyo anshaxa islaamku inoo dhigay.
6;waa in aad jaanis u siisaa waxyaabaha u gaarka ah si aanu shaydaanku u odhan waxaa jira sanduuq qufulan oo guriga yaala, sii jaanis tusna kalsooni hana waydiin su’aalo adag oo ay dhibsato ama uu dhibsado.
7;ha seegin in aad hadyado u keento ku kooban awoodaada, haba ahaato gobal yar oo xalwadana ha ahaatee gaara ahaan ayaamaha wanaagsan sida maalmaha tilmaaman ee farxada ama arooska ama meherkaba, ama gaar idiin ah.
8;xasuusi lamaanahaaga maalmo wacan oo si kadisa aad ugu sheegto maalmahaasi oo farxad badani idiinku dheehnayd. Marmar waxaad ku tidhaa maanta waxaan soo maqlay war cajiiba una xiise gali qofkii oo war cajiiba sugaya aayr waxaad dhegta ugu sheegtaa in aad aad u jeceshay, arrintaasi ha fududaysan waxay noloshiina galinaynaa dhiig cusub markasta hana biyo dhicin ee wakhtiyo ku beeg,
Xataa caruurta sheekh reer Berbera ah in Cumar Kujoog muxaadaro uu leeyahay waxaan ka guntay in cauurtaada maka lagu yidhaa hebel maanta waxaa ayuu sameeyay ee uu aad u baqdo lana sugaayo in aad ulayso aayar u yeedh oo waxaad dhegta ugu sheegtaa Aabo maanad ogayn in aan adiga cauurta kuugu jeclahay.
ugu yeedh magaca fiican ee uu leeyahay lamaanahaagu waliba magac kuu gaara oo cajiiba ula baxa. hana ka khajilin adigoo horjooga ehelkaaga iyo ehelkiisa.
Hana qarin jacaylka aad u hayso lamaanahaaga adigoo dadka la jooga ficil iyo hadalba taasi oo uu sameeyay rasuulku Salaahu Calayhi wasalam.
Wakhti gaara u samee oo aad ka buuxisaan farxad iyo kalgacal oo aan ahayn wakhtiga la joogo qolka hurdada.
Israaca oo wadaaga wada socod ka baxsan guriga idinkoo kaliya, iyadoo caruurtu idinla socdaan, wada booqda ehelkiisa ama ehelkeeda iyo asxaabtiina.
Usamee masruuf u khaasa oo ay arimaheeda gaarka ah ku fushato.
Mar mar ku xeel dheeraw sida wacan ee ay gabadhaadu guriga u hagaajiso una mahadceli cunto wanaageeda iyo sida ay u barbaariso ciyaalkeeda iyo martidaba waa wanaag adiga kugu soo noqonayaa qiimee qofkaaga si uu kuu qiimeeyo. Haddii aad wax diido iska daaa sida cuntada rasuulku Salaahau Calayhi wasalam waligii cunto loo soo dhigay muu ceebayn. Intay arritnaasi dhaawacayso ma qiimayn kartid iyo hawsha ay usoo martay iyadoo xanuunsanaysa in ay dirqi ku kharisaaba suurto gal ah.
Gunaanadkii wanaaga ha sugin ee adigu ahaw ka bilaaba, haddii khilaaf dhaco isu dulqaata maalin kastaa ciid maaha, balse waxaad ku dadaashaan wakhti kale oo aad dagan tihiin in aad isla saxdaan oo aad isku daydo haddaad khaldantahay adigu inaad raali galin bixiso.